को हुन् अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीका प्रेमी ? दुई वर्षभित्र बिहे पक्का ! « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » को हुन् अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीका प्रेमी ? दुई वर्षभित्र बिहे पक्का !
को हुन् अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीका प्रेमी ? दुई वर्षभित्र बिहे पक्का !
काठमाडौं । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध सार्वजनिक गरेकि छिन् । एक महिना लामो अमेरिका बसाइका क्रममा अभिनेत्री वर्षाले प्रमी सर्वजनिक गरेकी हुन् ।
विगतमा पनि अमेरिका जाने आउने गर्ने वर्षाको यसपटकको अमेरिका भ्रमणलाई भने धेरैले विशेष भनेका छन् । किनभने, यसपटक उनले प्रेमी सविनजंग थापालाई सार्वजनिक गरेकि थिईन । थापा अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । उनीसँगको चिनजान विगत तीन वर्षदेखीको भएपनि प्रेममा रुपान्तरण भएको डेढ वर्ष जति पुगेको वर्षा आफैले स्विकार गरेकी छिन् । आफन्त मार्फत सविनसँग चिनजान गरेकी वर्षा कुराकानी र भेटघाटका क्रममा नजिकिएको बताउँछिन् । अहिले भने दुबैले एकअर्काका परिवारबीच समेत परिचय गराई सकेका छन् ।
अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटील बिहे हुने पक्का भएपछि प्रेम सार्वजनिक गरेको जानकारी दिइन् । तर तत्कालै बिहे हुने देखिएको छैन । दुई वर्षभित्र बिवाह गर्ने योजनामा यी प्रेम जोडी रहेको बुझिएको छ । छोटो समयमै कलाकारिता क्षेत्रमा राम्रो छाप छोड्न सफल वर्षा अनावश्यक गसिप, विवाद र लभ अफेयरबाट सधैँ टाढा रहँदै आएकी थिइन् ।